शिवम् सिमेन्टको आईपिओमा २८ करोड ७१ लाखकाे आवेदन, युनिर्भसल पावरमा कति ? – Nepal Journal
शिवम् सिमेन्टको आईपिओमा २८ करोड ७१ लाखकाे आवेदन, युनिर्भसल पावरमा कति ?
Posted By: Nepal Journal February 19, 2019 | ७ फाल्गुन २०७५, मंगलवार १२:१७
शिवम् सिमेन्टले फागुन ६ देखि प्रिमियम मूल्यमा निष्काशन गरेको साधारण शेयरमा २८ करोड ७१ लाख ६९ हजार रुपैयाँ बराबरको आवेदन परेको छ।
बिक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटलका अनुसार मंगलबार बिहानसम्ममा ७ हजार ७९२ आवेदनबाट ९ लाख ५७ हजार २३० कित्ता शेयर माग भएको हो । शिवम् सिमेन्टको सर्वसाधारणमा २०० रुपैयाँ प्रिमयम सहित प्रतिकित्ता ३०० रुपैयाँको दरमा ४१ लाख २० हजार कित्ता र स्थानीयका लागि एक सय रुपैयाँ प्रिमियम सहित प्रतिकित्ता २०० रुपैयाँको दरमा ५ लाख ७९ हजार ६४० कित्ता शेयर निष्काशन गरेको हो।
सर्वसाधारणमा निष्काशन गरेको कूल ४४ लाख कित्तामध्ये कर्मचारीहरु र सामूहिक लगानी कोषले ६० हजार कित्ता मात्र किनेपछि बाँकी शेयर पनि सर्वसाधारणलाई नै थप गरी बिक्रीमा ल्याएको थियो।
यस आईपिओको शेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटल रहेको छ । आईपिओमा एनआईबिएल एस क्यापिटल, ग्लोबलआइएमई र सीबीआइएल क्यापिटलले शेयर अन्डरराइट गरेका छन्।
कम्पनीको आईपिओ आवश्यक आवेदन परेको खण्डमा फागुन ९ गते र सबै शेयर बिक्री नभएर चैत ५ गतेसम्म खुला हुन सक्नेछ ।
युनिभर्सल पावर कम्पनीको आईपिओ सबै बिक्यो, बुधबार बन्द हुने
यसैगरि युनिभर्सल पावर कम्पनीको आईपिओमा सबै बिक्री भएको छ। हाइड्रोपावरको आईपिओमा मंगलबार बिहानसम्ममा एक लाख एक हजार ९६ वटा आवेदकले ८८ लाख ८९ हजार ६२० कित्ताका लागि माग गरेका छन् ।
सबै शेयर बिक्री भएपछि बिक्री प्रबन्धकले बुधबार कम्पनीको शेयर निष्काशन बन्द गर्ने जनाएको छ ।
Be the first to comment on "शिवम् सिमेन्टको आईपिओमा २८ करोड ७१ लाखकाे आवेदन, युनिर्भसल पावरमा कति ?"